नुहाउने ठाउँ, मसाज, स्वास्थ्य | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: स्नान, मालिश, स्वास्थ्य
क्यालेन्डर फ्लेक्स स्ट्रेचिंग गर्दै छन्? उनीहरूले के प्रभाव र योगदान गर्छन्?
फ्लेक्स स्ट्रेचिंग क्लास के हो? उनीहरूले केमा प्रभाव पार्छन् र योगदान पुर्‍याउँछन्? हो ... हालaबर्ष देखि कोरियोग्राफिक सेट मा छ, जबकि ligaments ताने! र यहाँ, "कसरी ...
के यो गधा ग्याँस गर्न सम्भव छ?
स्क्वट्सको साथ गधा पम्प गर्न सम्भव छ? तपाईं squats संग पम्प गर्न सक्दैन। स्क्वाटहरू फिलामा स्विंग गर्दै। गलिना, आँखाहरू र कुखुराको मस्तिष्क र त्यस्तो प्रभाव अब यो शीर्षकमा दिइएको छैन: तपाईंको गधा केवल स्क्वाट्सको साथ पम्प गर्नुहोस् र तपाईं सक्नुहुन्छ!
द्वारिका पवित्र संपीडन संग Intervertebral डिस्क प्रोट्रूजन!
ड्युरल थैलीको कम्प्रेसनको साथ इन्टरभेर्टेब्रल डिस्कको प्रसार! प्रोट्रुजन - हर्नियाको शुरुवात)) र यो स्नायु प्रभावित भएको देखिन्छ)) सुजनको धेरै गम्भीर दुखाइ सम्भव छ)) सल्लाह (यदि छाती वा काठको कशेरुकमा फैलिएको छ भने) पर्खनुहोस् ...
एरोबिक्सले के गर्छ? एरोबिक्स भनेको के हो?
एरोबिक्समा तपाई के गर्नुहुन्छ? एरोबिक्स भनेको के हो ?? एरो # 769 XNUMX;; बिका (लयबद्ध जिम्नास्टिकको रूपमा पनि चिनिन्छ) व्यायामनास्टिक जुन तालयुक्त संगीतको साथ जुन व्यायामको ताल अनुसरण गर्न मद्दत गर्दछ। व्यायाम को सेट मा शामिल ...
लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज - यो के हो?
लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज - यो के हो? कम्पन मसाज जस्तो केहि चीज टिश्युहरूमा फ्ल्युड स्थिरता हटाउन, लिम्फ प्रवाहको गति बढाउन, टिश्यू मेटाबोलिजम र पोषण सुधार गर्न, सक्रियताले विषाक्त पदार्थहरू हटाउन क्रममा म्यानुअल मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज गरिन्छ। मुख्य ...
हरेक दिन प्रति दिन मान्छे को एक युगको मालिश चिकित्सक दर श्रम कोड अनुसारको के हो?
प्रति दिन काम गर्ने मसुरमा कतिवटा इकाइहरू हुन्छन्? श्रम कोड अन्तर्गत के आदर्श हो? १-15-२० व्यक्ति M 20 MEaदिनको बसाई र-घण्टा कार्य दिन। श्रम कोड अन्तर्गत ...
मेरो पछाडि दुख्छ। मेरो पीडाले एक कुर्सीमा मद्दत गर्न मलाई पछि लाग्न मद्दत गर्दछ
मेरो पछाडि दुख्छ मेरो पछाडि दुख्यो धेरै लामो कुर्सिमा बसे पछि, मलाई सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोस् कुर्सी पछाडि नबस्ने प्रयास गर्नुहोस्, तर कुर्सीमा। राम्रो साइट मलाई तपाईंको मेल दिनुहोस् !! ! ...
पहिलो पटक सौनामा जाँदै। तिम्रो साथ के गर्ने?
म पहिलो पटक सौना जाँदैछु। तपाईलाई के लिनु हुन्छ? प्रेमिका .. बियर साथी र केटा केहि छैन! फराकिलो तौलिया, कपालको लागि टोपी, शरीरमा माल्सिनको लागि नुन, मासुले, पखाल्दा र ...
विषाक्तहरू के हुन्? अनि किन तिनीहरू प्रदर्शन गर्छन्?
विषादी के हो? र किन तिनीहरूलाई बाहिर ल्याउन? र म भालेरियाको अवतार पढ्दिन। अध्ययनले देखाएको छ कि विश्वव्यापी रूपमा हुने सबै मृत्युको 98%% विभिन्न रोगका कारण हुन्।
ओवरलोड पछि खुट्टाको मांसपेशिहरु लाई चोट पुर्याउँछ। के गर्न
खुट्टाको मांसपेशि धेरै भार पछाडि धेरै दुखेको छ। के गर्ने? एक्वा प्रयोग गरी हेर्नुहोस्, कुनै मांसपेशिमा चोट नपुगे पछि तिनीहरू आफैंबाट जानेछन्! तपाईं कुनै पनि तरिकाले मद्दत गर्न सक्नुहुन्न यदि तिनीहरूले व्यायाम पछि निश्चित रूपमा तपाईलाई चोट पुर्‍यायो। मसाज, ...
कहाँ धुनु मास्को
कहाँ धुने? मस्को कुन्त्सेभस्की नुहाउने ठाउँ - ru 350० रूबल असीमित समय त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्: १. एक प्रवाह मार्फत वाटर हीटर किन्नुहोस्। अर्को वर्ष उनीहरूले यसलाई फेरि बन्द गर्दछ, त्यसैले यो फिट हुनेछ। सस्तो (राम्रो ...
मालिशको बारेमा। मालिशको बारेमा एक कविता लेख्नुहोस् यो धेरै आवश्यक छ! कम्तिमा4स्टिचहरू
मसाजको बारेमा। कृपया मसाजको बारेमा कविता लेख्नुहोस्। कम्तिमा lines लाइनहरु हामी कल्पना गर्न कोशिस गरौं कि कसरी कोमल सुस्तताले तपाईको शरीरलाई कम्बल जस्तो झल्काउँदछ यो लामो समयदेखि आराम गर्न चाहान्थ्यो र कसैलाई ...
के म मसाज चिकित्सकको रूपमा काम गर्न मेडिकल डिग्री चाहिन्छ वा पाठ्यक्रमहरू समाप्त गर्न पर्याप्त छ?
के मसँग मसाज थेरापिष्टको रूपमा काम गर्नको लागि मेडिकल डिग्री चाहिन्छ वा पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्न पर्याप्त छ? पक्कै पनि। र अगाडि यो सजिलो र ठूलो आय हो भनेर नसोच्नुहोस्। यो कडा शारीरिक र नैतिक काम हो ...
पछाडिको पखेटाको व्यापक मांसपेशी कसरी पम्प गर्ने ..
पछाडिको पखेटाको लेटिसिमस मांसपेशिहरू कसरी पम्प गर्ने .. केही व्यायामहरू: १. टाउकोको पछाडिको पछाडि २. फराकिलो पकडसहित तान्नुहोस्। ठाडो पट्टि पेटमा तान्नुहोस् back. भुइँमा समानान्तर फिर्ता, एक खुट्टा भुइँमा ...
तपाईलाई स्नानको साथ तपाईलाई लिनु आवश्यक छ?
तपाइँलाई सौनामा लैजान के आवश्यक छ? परिचर, उसले आराम लिनेछ! त्यसो भए हामी बाथहाउसमा जान्छौं। तपाईं सफा कपडाको अलावा तपाईं नुहाउन के गर्न आवश्यक छ? त्यसैले हामी सूची दिन्छौं ...
स्नानमा बांस काट्ने कसरी प्रयोग गर्ने? के तिनीहरू भाप भइरहेछ?
सौनामा बाँसको स्टिक कसरी प्रयोग गर्ने ?? के ती उखालिनु पर्छ? मलाई बाँसको झाडूको बारेमा थाहा छैन। लाठी मालिशको रूपमा प्रयोग गरीन्छ। यो रडको रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छ। केवल यो स्टीम कोठामा मात्र गरिन्छ, तर पनी ...
तपाईंको सहयोग बिना तपाईको आफ्नै पछाडि कसरी हटाउने?
कसरी पछाडि आफुलाई क्रन्च गर्ने, कसैको मद्दत बिना, आफ्नै आफ्नै? स्वयं उपचार एक गाह्रो तर प्रभावकारी कला हो आफैलाई हानी गर्ने! कहिलेकाँही यसले भुईंमा सुत्न, छातीमा घुँडा टेकाउन, आफ्ना खुट्टामा तपाईंको पाखला लपेट्न मद्दत गर्दछ। बाट रोल आउट ...
ह्यामम स्नान के हो?
हमाम नुहाउने भनेको के हो? किस्चाको साथ टर्कीको नुहाउने ठाउँ (यो पछाडि विशेष वासको कपडाले बेह्रेको छ भने यसले फोहोर हटाउँछ) हामी टर्कीमा थियौं र त्यहा नुहाउन गयौं। यो शंकु संग यस्तो कोठा हो ...
स्की सिम्युलेटर कार्डियोको लागि सही नाम के हो?
स्की सिम्युलेटरको लागि सही नाम के हो? कार्डियो ट्रेनरहरू सिमुलेटरहरू हुन् जसले एक व्यक्तिको लागि प्राकृतिक आन्दोलनहरूको नक्कल गर्दछ: दौड, स्कीइ,, सीढी चढाई, रोइ,, साइकल। यसका आधारमा, तिनीहरू भिन्न छन् ...
व्यायाम बाइक अझै पनि प्रेस भन्दा अन्य केहि दिन्छ?
के व्यायाम बाइकले तपाईंलाई एब्स बाहेक अरू केहि दिनुहुन्छ? यो घुडा जोड्ने र ligaments को लागी एक धेरै उपयोगी व्यायाम हो ... खुट्टा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो!) खुट्टा पम्प अप मांसपेशिहरु को सुदृढीकरण ...
89 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,849 प्रश्नहरू।